Mofon’aina – ALATSINAINY 05 MARTSA 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 05 MARTSA 2018
5 martsa 2018
8 Nefa, ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy hohadinoinareo: ny indray andro amin’ ny Tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro.9 Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ ny fibebahana izy rehetra,10 Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron’ ny Tompo, ary amin’ izany ny lanitra dia ho lasa amin’ ny firimorimoana mafy, ary ho levon’ ny afo ny tenan’ ny zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo Aminy.
II PETERA 3 :8-10
Mampirisika antsika hifona sy hibebaka ny Tompo amin’ny alalan’ny Soratra Masina. Ny Apostoly dia nampahery ny fiangonana mba tsy hisalasala satria fohy ihany ny fotoana ho antsika mitaha amin’ny fotoanan’ny Tompo .
1-Aza mangataka andro ela raha hibebaka
Voafetra isika ka na ny andro hahavelomantsika aza dia eo an-tànan’Ilay Tompo sady Mpamonjy. Ny heloka rehetra, ny fahadisoana samihafa dia tian’ny Tompo tsy hahavoa antsika. Koa mandrosoa eo anatrehan’ny Tompo amin’ny fanolorantena, mba hosasany sy hodioviny indray. Ny Tompo no miantso ny olona hibebaka ka hiala amin’ny ratsy fanao. Aoka hanatona ny Tompo amin’ny fo mino isika rehefa mivavaka Aminy.
2-Aza miherikerika intsony, fa jereo Jesoa
Manankery hanafaka antsika ny Rà nalatsaky ny Tompo teo amin’ny hazo fijaliana. Tiany ho madio sy masina isika ka tsy ho faty na ho very. Izy no mitantana sy mitondra , ka aoka isika hankato ny teniny .Mijery Azy isika raha manaraka izay lazainy , mijery Azy isika raha manaiky ny toromarika omeny hananantsika fiainam-baovao ao Aminy . Tsy tokony hitady famonjena hafa intsony satria Jesoa Kristy ihany no Mpamonjy izao tontolo izao. Misokatra ho an’izay mibebaka ihany ny làlam-pamonjena.
Efa manana fiainam-baovao ve ianao ?
Mofon'aina - TALATA 06…